Libya oo ku gacan seertay qaraarkii Maxkamdda ICC-da xilli caalamkuna uu soo dhoweysay – SBC
Libya oo ku gacan seertay qaraarkii Maxkamdda ICC-da xilli caalamkuna uu soo dhoweysay
Posted by editor on Juun 28, 2011 Comments
Lahai:- Wasiirka garsoorka Libya maxed Al-qaamuudi ayaa sheegay in dalkiisu uusan aqbali doonin qaraarka maxkamadda oo ay ka aaminsan yihiin in ay tahay wax ay ku adeegtaan dowladaha reer galbeedka oo loo dhistay dunida saddexaad .
Dhanka kale afhayeenka aqalka cad ee mareykanka Jan Carney ayaa soo dhoweeyey qaraarka maxkamadda.
Sidoo kale Xoghayaha arrimaha dibadda Britain William Hague, ayaa soo dhoweeyey qaraarkii maxkamadda, wxuuna ku tilmaamay mid muujinaya in madaxweyne Qadaafi uu waayey sharciyaddiisa.
Maxkamadda Caalamiga ee Dambiyada Dagaalka ee ICC ayaa amar ku bixisay in la xiro madaxweynaha Libya, Mucamar Qadaafi iyo wiilka Qadaafi, Seyful Islaam Qadaafi iyo hoggaanka ciidanka sirdoonka ahna seedigii Cabdalla Sanuusi.
Garssoorayaasha maxakamadda ayaa sheegay in Qadaafi uu qorsheeyey dilka , dhaawaca iyo xiritaanka dad rayid ah labo iyo tobankii maamlmood ee ugu horeeyey kacdoonka lagu doonayo in xilka looga tuuro.
Madaxa maxkamadda haweenayda lagu magcaabo Sanji Monajanji ayaa sheegtay in ay jiraan waxyaabo muujinaya in Qadaafi iyo wiilkiisa ay mas’uul ka ahaayeen dilka iyo caburinta dad rayid ah.
Bishii febuary ee la soo dhaafay ayey ahayd markii dacwad oogaha maxkamada dambiyada caalamiga Luweis Moreno Ocampo uu u gudbiyey maxkamadda ICC qoraal uu kaga codsanayo in Qadaafi maxkamadda dambiyada dagaalka la horkeeno.
Qadaafi oo ah Madaxweynaha uga cimriga dheer ee kursiga ku fadhiya qaaradda Africa, ayaa si dhab ah aan loo saadaalin Karin halka mustaqbalkiisu ku dambayn doono, waxaannu taageero ka haystaa ciidammada iyo weliba dalalka African-ka oo uu dhaqaalaha ugu badan ku bixiyo.
Amarkan ayaa yimid iyadoo Libya ay ku socoto duqeyn cirka ah oo ay ku waddo gaashaan buurta NATO.